Cilada uu leyahay - Kaniiniga ilmo iska soo ridid
Cilada uu leyahay Xalada nooce ah ayaa ladaremaa marka marka laqaato kiniinkan?
Arimaha la’iska arko waxa kamid ah xanun turqin leh oo caloosha ah iyo dhiigbadan oo kaayimaada calamadahanin maadama ay yihiin kuwa muujinaa shaqaynta dawada loomabaahino in loo arko dhibaato caafimaaddaro hase’araate waxa habboon in la’aogaado inta wakhti ee u qaadanaay dhi baxani Hawenku waxay
Iskadaremaan turqin dheeraadah oo kabada tan la dareem oo marka ay caadadu timaado
Waxa jira haweenuu kubato dhigu marka ay qaatan kiniinkan. Wakhati yar kadib qaadashada kiniinka miisobroostool waxa dhacda in uu kaasoobaxo dig duuduuban oo ukunta lee goo gadhood u eegi
Hawenka qaarkood waxa lagayaabaa in u kayimaado dhigcaadi oo lamid ah ka kayimidaa marka cadada.
Armaha loobaayanyahay in loodiyaar galoobo
Turqiin iyo dhiig kaayimaada waa calamada lagu yaqaano. Hana biqin hadii u kaaymaado dhiig badan maadama uu dhiigu yimaado marka la’isticmaalo nooca kiniinkan
Calool xanuun ba’an hadii ladaremo waxa habboon in laqaato kiinka ibubirofiin waa caadi in la’ibsado oo la qaato kiinkani oo ah ilaa 200 oo miligraam iyada oo uuna dhakhtarku kuuqorin 6-8 sacadood mar qudhaata 3-4 xabadood oo kiniin ah waala qaadan karaa, waana kiniin lagaga ladnaado xanuunka caloosha.
Marka kiniinka ilma la’iskaga soorido laqaato waa wax caadi’ah in la’iska arko calamadaha aan korka ku soosheg nay. Fojignaada calamada hosta kuxusani waa kuwa khatarta ah
Marka uu ilmhu kaasoobaxaayo waa wax caadiya arimaha korka kakusan in ay qofka lasoodarsa an. Arimaha u baahan in aad sifoojiga u lasocotid. Dhiiga kaabaxaaya 2 saacadood gudaheed hadii u aad u qooyo marada aa ishoosdhigtay amabo moodeska waa mid caadiya dhigani waa mid mujinaaya soobixitaanka ilmaha makaanka kajira
Haday dhibaatadin muuqato waxa cad in ay jirto dhibaato laxidhiidha uurka xitaa hadii laqaato kiniinka ibrofiin oo ay waxaba iskabadaliwaydo xanuun jira waxa suurtagal ah in ay jirto dhibaato caafimad. Waxana isku daynaa in aan wax kashegno daawaynta loobaahanyahay marka ladaremo xanuunka la’iskuarko wakhtiga uurka
Xanuun dheraad ah madaremaysaa? Kadib marka aadqadato kiniinka la’iskaga soorido ilmaha lama daremo wax xanuun ah. Marka aad karaanunka aad dareentid ee aad qaatid ibroofin hadii u kaajoogsan wayay xanuunka lakaasho dhakhaatirta xanuunka nocanii waxa u dhickara marka uu ilmu dhisoobo oo kazoo baxaayo ilmagalenka in aadan bilaabn qaadashada kiinkan. Marka nocaasi waxa dhickartin ay nolashaadu khatar 2 kusugantahas.
wax xanuun ah ma’iska dareenta?
Maalinta aad qaadafid kiniinka misbrootool waxa aad isku arkikartaa, qandho yalaalugo, iyo hunqaaco.
Waxa dhickarta islamarka aad qaadatid kiniinka in aad coofmaad qab dareentid marka aad qaadatid kiniinka mibrostol hadii aad xanuun dheeraad ah dareentid latasho dhakhaatirta